News Collection: ´गुजारिश´ मा गरमा गरम दृष्यहरू ऋतिक रोशन तथा अभिनेत्री ऐश्वर्याले गरमा गरम दृष्यहरू दिए!
´गुजारिश´ मा गरमा गरम दृष्यहरू ऋतिक रोशन तथा अभिनेत्री ऐश्वर्याले गरमा गरम दृष्यहरू दिए!
बलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन तथा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको जोडी 'धूम-2 ' तथा 'जोधा अकबर' मा उतकृष्ट देखिएका थिए। यीनीहरूको जोडी रहेको संजय लीला भंसालीको आगामी चलचित्र 'गुजारिश' मा निकै गरमा गरम दृष्यहरू पनि देख्न पार्इने भएको छ।
हुन त ऋतिक तथा ऐशको पछिल्ला चलचित्रहरूमा पनि चुम्मन लगाएत केही अन्तरगं दृष्यहरू रहेको थियो। तर यस चलचित्रमा यीनीहरूबीच कैयन गरमा गरम दृष्यहरू राखिएको छ जसलार्इ देखेर दर्शकहरू अच्चमित हुने फिल्मी समिक्षकहरूले ठहर गरेका छन्। खबरका अनुसार यस्ता दृष्यहरू छाँयाकंन गर्दा ऐशले व्यवसायिक पना देखाएकी छिन्। चलचित्रका निर्देशक भंसालीले यस्ता दृष्यहरूको छाँयाकंनका समय ऐशलार्इ गाह्रो होला भनेर सोचेको भएता पनि ऐश्वर्या रायले व्यवसायिकतालार्इ माथी राख्दै सहज तरिकाले छाँयाकंन कार्य सकाएका थिए। यस्ता दृष्यहरूको छाँयाकंनका समय सेटबाट निर्देशक तथा कैमेरामैन मात्र बसेर लिएका थिए।